Umboneleli weNkqubo yeLayisensi yePlayithi yokuQatshelwa, iNkqubo yokuPaka eNgcono ye-ANPR
Inkqubo yokuskena phantsi kwemoto
Ekhaya > Iimveliso > I-Smart Parking
Olu didi lumalunga nenkcazelo yehardware yevidiyo yemveliso yenkqubo yokupaka ekrelekrele. Iinkqubo zokupaka ii-Smart zihlala zibandakanya iinkqubo ze-smart hardware kunye neenkqubo zesoftware esebenzayo ukuqinisekisa ukusebenza okusisiseko kwazo zonke iimveliso. Ukongeza, ukucwangciswa kwe-docking yentlawulo yongezwa, okwandisa kakhulu i-AI yengqondo yenkqubo yonke. Olu didi luquka inkqubo yokuqaphela ipleyiti yelayisensi ekrelekrele, i-alpr smart parking, itikiti elihlakaniphile elinenkqubo ye-lpr, inkqubo yokupaka i-alpr ehlakaniphile., njl.
TGW ALPR yolawulo lokupaka iKhamera yeLayisensi yepleyiti yoKubonwa kweKhamera enesoftware yolawulo lokufikelela kwikhamera ye-ip
Itekhnoloji yeLayisensi yePlathi yokuQatshelwa kweLayisensi (iLayisensi yePlati yokuQatshelwa, iLPR) isekwe kwitekhnoloji yekhompyuter, itekhnoloji yokucubungula umfanekiso, kunye neNgcaciso engaqondakaliyo yokwakha iimpawu zemodeli yesithuthi, ukuchonga iimpawu zezithuthi, njengePlati, imodeli, umbala, njl. Iyakwazi ukukhupha ngokuzenzekelayo umfanekiso wepleyiti emfanekisweni, isebenzisa iteknoloji yokucubungula umfanekiso ophezulu, ukuqaphela ipateni kunye nobukrelekrele bokwenziwa kwimifanekiso eqokelelweyo yolwazi kunye nokucubungula, inokuchonga ipleyiti yelayisensi Amanani, iileta kunye nabalinganiswa baseTshayina, kwaye inikwe ngokuthe ngqo. isiphumo sokuqaphela, yenza inkqubo ibe yinyani.Uphawu lwenkqubo yokuqaphela ipleyiti yelayisensi1. Inokuchonga umbhalo welayisensi yesithuthi kunye namanani2. Ngaba ukuchonga umgca omnye kunye nemigca emibini ipleyiti yelayisensi inombolo3. Unganakana 0-2 oonobumba kunye namanani 1 ukuya 4 inombolo yelayisensi plate4. Unokuchonga isiTshayina kunye nesiNgesi senombolo yepleyiti yelayisensi5. Iziko ledatha linokugcina umfanekiso wokuthwebula, inombolo yepleyiti yelayisensi, inombolo yendlela kunye nexesha lesithuthi ngerekhodi.6. Inombolo yepleyiti yokungena kunye nerekhodi yokuphuma inokunika ingxelo ngesiphumo7. Inkxaso yesiNgesi, isiKorea, isiTshayina Esenziwe Lula kunye nesiShayina seMveli kunye nolunye ulwimi olunokwenziwa ngokwezifiso.8.Ubungakanani bomfanekiso: 768 * 576pixels9.ubungakanani bangaphambili: 16 * 16-48 * 64 pixelsI-10.inqanaba lompu wekhamera: i-angle ephezulu ye-25 degree kwi-drive laneI-11.ikhamera i-angle ethe nkqo yompu: i-angle ephezulu ye-25 degree kwi-horizontal12.Ukukhanya okuncinci: 500lux
IP LPR Ikhamera yelayisensi yokuqaphela inkqubo yokupaka imoto
Yintoni i-LPR(i-License Plate Recognition) iTekhnoloji?I-LPR okanye i-ANPR(UNakano lwePleyiti yeenombolo ezizenzekelayo)buchwephesha obusebenzisa ukuqondwa koonobumba kwimifanekiso ukufunda iipleyiti zobhaliso lwesithuthi ukwenza idatha yendawo yemoto. Inokusebenzisa umabonakude okhoyo ovaliweyo, iikhamera zonyanzeliso lomthetho wendlela, okanye iikhamera eziyilelwe umsebenzi. I-LPR isetyenziswa ngamapolisa kwihlabathi jikelele ngeenjongo zokuthotyelwa komthetho, kuquka ukujonga ukuba imoto ibhalisiwe na okanye ilayisenisi. Ikwasetyenziswa kwingqokelela ye-electronic toll collection kwi-pay-per-use roads nanjengendlela yokwenza ikhathalogu yeentshukumo zetrafikhi, umzekelo zii-arhente zeendlela.Ukwaziwa kwepleyiti yephepha-mvume kunokusetyenziselwa ukugcina imifanekiso ethathiweyo ziikhamera kunye nesicatshulwa esisuka kwipleyiti yelayisensi, kunye nokulungiselelwa ukugcina ifoto yomqhubi. Iinkqubo zihlala zisebenzisa ukukhanya kwe-infrared ukuvumela ikhamera ukuba ithathe umfanekiso nangaliphi na ixesha emini okanye ebusuku. Itekhnoloji ye-LPR kufuneka ithathele ingqalelo ukwahluka kwepleyiti ukusuka kwindawo ukuya kwenye.Izinto eziluncedo zobugcisa be-LPR:1. KuLawulo lweNdawo yokuPaka;2. Ukuchonga umbhalo wepleyiti yesithuthi kunye namanani ngokuzenzekelayo;3. Gcina iindleko zabasebenzi kunye nobunzima bolawulo kulawulo lwendawo yokupaka;4. Ukuphucula ukusebenza kakuhle kwezithuthi;5. Ulawulo lwendawo yokupaka ngaphandle kwekhadi;
Inkqubo yokuqaphela ipleyiti yelayisensi
I-Shenzhen TGW Technology Co.,Ltd ngoyena mboneleli wesisombululo esikhokelayo solawulo lokufikelela kwinkqubo yokupaka isithuthi esikrelekrele, inkqubo yokuqaphela ipleyiti yelayisenisi kunye nolawulo lwabahambi ngeenyawo olujikajikayo kunye nokuqondwa kobuso.
Umgangatho ophezulu LPR ilayisenisi ipleyiti yokuqaphela inkqubo yekhamera smart yokupaka nge software anpr
Itekhnoloji yeLayisensi yePlathi yokuQatshelwa kweLayisensi (iLayisensi yePlati yokuQatshelwa, iLPR) isekwe kwitekhnoloji yekhompyuter, itekhnoloji yokucubungula umfanekiso, kunye neNgcaciso engaqondakaliyo yokwakha iimpawu zemodeli yesithuthi, ukuchonga iimpawu zezithuthi, njengePlati, imodeli, umbala, njl. Iyakwazi ukukhupha ngokuzenzekelayo umfanekiso wepleyiti emfanekisweni, isebenzisa iteknoloji yokucubungula umfanekiso ophezulu, ukuqaphela ipateni kunye nobukrelekrele bokwenziwa kwimifanekiso eqokelelweyo yolwazi kunye nokucubungula, inokuchonga ipleyiti yelayisensi Amanani, iileta kunye nabalinganiswa baseTshayina, kwaye inikwe ngokuthe ngqo. isiphumo sokuqaphela, yenza inkqubo ibe yinyani.
Indawo yokuPaka yoKupaka iTikiti eNzima nethambileyo kunye neNkqubo yoLawulo lokuPhuma
Indawo yokuPaka yoKupaka iTikiti eNzima nethambileyo kunye neNkqubo yoLawulo lokuPhumaInkqubo yokupaka iimoto eziphambili zibandakanya.1. Inkqubo yolawulo lokupaka i-dispenser yekhadi + umfundi wekhadi.2. Inkqubo yokulawula indawo yokupaka itikiti + isifundi sekhadi.3. RFID umgama omde wokufunda inkqubo yolawulo yokupaka + RFID Etag.4. I-ANPR (i-Automatic Number Plate Recognition) inkqubo yolawulo lokupaka.Inkqubo yokupakaAmacandelo AngundoqoPhawula(Ikhadi lokuhambisa+ Umfundi wekhadi)Inkqubo yokupaka iimotoUmatshini wokukhupha amakhadi& UmfundiIindwendwe zexeshana:1.Abatyeleli bacofa iqhosha ukufumana ikhadi kumatshini wokukhupha ikhadi lokungena emva koko isango lomqobo liya kuvula ngokuzenzekelayo.2.Xa imoto idlula, isango lomqobo liya kuvala ngokuzenzekelayo.3. Xa iindwendwe zihamba, kufuneka zihlawule umrhumo wokupaka kwiziko lolawulo. Okanye hlawula kumatshini wentlawulo yokupaka.(Funda amakhadi uze ubale umrhumo wokupaka).4. Emva kwentlawulo, abasebenzi beziko bavula isango elingumqobo ukuze iindwendwe zihambe. (Ukuba uhlawula kumatshini wokuhlawula, iindwendwe zibuyisela ikhadi kumatshini wokuphuma kunye nomamkeli wekhadi, emva koko isango lomqobo liya kuvula ngokuzenzekelayo.)5.Isango lomqobo livale emva kokuba imoto idlule ngokuzenzekelayo.Abasebenzisi bexesha elide:bahlawula kwangaphambili baza bafumana amakhadi abhalisiweyo. Baswayipha nje amakhadi kwindawo yokungena& umatshini wokuphuma kunye nesango lomqobo liya kuvula ngokuzenzekelayo.Umqobo weSangoIziko loLawulo lokuPaka okubandakanya iSoftware, iPC, uMniki weKhadi njl.njl.Umatshini weNtlawulo yokuPaka (Ngokuzithandela)(ISikhuseli seTikiti +IsiFundo seKhadi)INkqubo yokuPaka iMotoUmtshini wokukhupha amatikitiIindwendwe zokwexeshana.1.Abatyeleli bacofa iqhosha ukufumana itikiti kumatshini wokuhambisa itikiti lokungena emva koko isango lomqobo liya kuvula ngokuzenzekelayo.2.Xa imoto idlula, isango lomqobo liya kuvala ngokuzenzekelayo.3. Xa iindwendwe zihamba, kufuneka zihlawule umrhumo wokupaka kwiziko lolawulo. Okanye hlawula kumatshini wentlawulo yokupaka.(Skena amatikiti uze ubale umrhumo wokupaka).4. Emva kwentlawulo, abasebenzi beziko bavula isango elingumqobo ukuze iindwendwe zihambe. (Ukuba uhlawula kumatshini wokuhlawula, iindwendwe ziskena nje itikiti kumatshini wokuphuma ngesikena setikiti, emva koko isango lomqobo liya kuvula ngokuzenzekelayo.)5.Isango lomqobo livale emva kokuba imoto idlule ngokuzenzekelayo.Abasebenzisi bexesha elide: bahlawula kwangaphambili baza bafumana amakhadi abhalisiweyo. Baswayipha nje amakhadi kwindawo yokungena& umatshini wokuphuma kunye nesango lomqobo liya kuvula ngokuzenzekelayo.Umqobo weSangoIziko loLawulo lokuPaka okubandakanya iSoftware, iPC, iSikena seTikiti, isifundi seKhadi njl.njl.Umatshini weNtlawulo yokuPaka (Ngokuzithandela)RFID Car Parking SystemI-RFID ReaderKubasebenzisi bexesha elide kuphela.1.Abasebenzisi bahlawula kwangaphambili umrhumo wokupaka wenyanga kwaye bafumane ikhadi le-RFID kwiziko lolawulo.2.Abasebenzisi bancamathelisa ikhadi le-RFID kwi-windshield.3.Xa abasebenzisi beqhuba iimoto zabo kufutshane nesango lokungena, umfundi wekhadi okwisango lokungena uya kufunda ikhadi le-RFID kwi-windshied kumgama omde.4.Once read , isango lomqobo liya kuvula ngokuzenzekelayo.5.Xa imoto idlula, isango lomqobo liya kuvalaIkhadi le-RFIDUmqobo weSangoIziko loLawulo lokuPaka okubandakanya iSoftware, iPC, uMniki weKhadi njl.njl.UkuQatshelwa kwePleti yeenombolo ezizenzekelayo (ANPR)Ikhamera ye-ANPRIindwendwe zexeshana:1.Xa iindwendwe ziqhuba iimoto zabo kufuphi nesango lokungena, ikhamera ye-ANPR kwisango lokungena iya kuthatha iifoto zeplate yelayisensi kwaye ilayishe ulwazi kwiziko lolawulo.2.Xa inombolo yepleyiti ivunyiwe, isango lomqobo liya kuvula ngokuzenzekelayo. Kwaye xa iimoto zidlula, umqobo uya kuvala ngokuzenzekelayo.3. Xa iindwendwe zihamba, kufuneka zihlawule umrhumo wokupaka kwiziko lolawulo. Okanye hlawula kumatshini wentlawulo yokupaka.(Faka inombolo yepleyiti yelayisensi uze ubale umrhumo wokupaka).4.Xa uphuma, ikhamera ye-ANPR iyakuqaphela inombolo yepleyiti kwakhona. Ukuba intlawulo yenziwe, umqobo uya kuvuleka. Ukuba intlawulo ayenziwanga, umqobo awuyi kuvuleka kwaye iPC iya kunika isaziso.5.Xa imoto idlula, isango lomqobo liya kuvala.Abasebenzisi bexesha elide: inombolo yepleyiti yabo iya kubhaliswa kwiziko. Isango lomqobo liya kuvula nje ukuba inombolo yepleyiti yelayisensi yamkelwe.
IsiXhobo sokuPaka esiSmart sokuPaka itikiti lesixhobo sokulawula ukufikelela kwisixhobo sokufikelela
IsiXhobo sokuPaka esiSmart sokuPaka itikiti lesixhobo sokulawula ukufikelela kwisixhobo sokufikelela.Intengiso eshushu enoBukrelekrele bokuPaka iTikiti lokuShicilela umatshini wokuhambisa itikiti kwiNkqubo yeLoti yokuPakaInkqubo yekhadi le-IC/ID efana nenkqubo yetikiti, vele utshintshe itikiti kwi-IC / ikhadi le-ID ekufuneka liqokelelwe xa intlawulo igqityiwe.Inkqubo yolawulo lokupaka yinkqubo yanamhlanje nekrelekrele yolawulo lokupaka izithuthi. Isetyenziselwa ngokubanzi kwiindawo zokuhlala, iiofisi, iindawo zokuthenga, izibhedlele kunye nezinye iindawo zoluntu zolawulo lwezithuthi, ulawulo kunye nokuveliswa kwengeniso.Inokuphucula kakhulu ukusebenza kakuhle kokulawulwa kweendawo zokupaka, ukuqinisa ukhuseleko lwezithuthi, ukunciphisa abasebenzi kunye neendleko, kunye nokuphepha ubuqhetseba, kwakhona. ukufumana inzuzo kunye nengeniso yomphathi wokupaka.I-TGW ibonelela ngezixhobo zokupaka iimoto eziphambili kunye nesisombululo sokusombulula iingxaki zakho zokupaka, ezibandakanya ikhadi le-RFID / ikhowudi yekhowudi ye-dispenser inkqubo yokupaka, inkqubo yokupaka i-RFID yekhadi elide, inkqubo yokupaka i-ANPR, umatshini wokuhlawula wokupaka.
IKiosk yoBuchule obuPhezulu obuPhakamileyo beNtlawulo yeNtlawulo yeMoto eneBarcode Reader
UMTSHINI WENTLAWULO NGOKUZENZAKALELAYO.Iimbonakalo:UkhuselekoUmnyango omkhulu uvaliwe kunye ne-electronic lock yokhuseleko kunye ne-crossbar system yokuvala. Kwaye isitshixo sokhuseleko sombane kufuneka sivulwe ngekhadi lomlawuli kunye namagama ayimfihlo.Iibhokisi zokhuseleko lwemali zinemodyuli ekhuselekileyo eyahlukileyo.Ubukhulu bebhokisi yi-4-5mm, kwaye iibhokisi zokhuseleko zemali zitshixiwe ngezitshixo zazo zeminyango.Imali yentlawulo ekhoyo, amatyala, ibhanki/amakhadi okuthenga ngetyala, iPasss ekhawulezayo efumanekayo yeBabknotes Input $5, $10, $20, $50, $100Isiphumo esikhoyo samanqaku ebhanki$1, $5, $20Ingeniso yeNgqekembe ekhoyo$1, $5, $10Imveliso yeNgqekembe ekhoyo$0.5, $1Ndifumane umsebenzi wokufumana imoto yakhoLo msebenzi ukhethekile kwiindawo zokupaka ezinenkqubo yevidiyo yokupaka isikhokelo kunye nenkqubo yokuqaphela iipleyiti zeLayisensi. Faka inombolo yepleyiti yelayisenisi yemoto yakho, i-22" HD LCD Touch screen yesikrini iya kubonisa kanye indawo ekuyo imoto yakho kwindawo yokupaka ngemephu yombane, kwaye ikwabonise eyona ndlela ilungileyo yokufumana imoto yakho.I-alamu yomonakaloUmatshini unekhamera yokubeka iliso kwaye unenzwa ye-infrared. Inokurekhoda abo bayisebenzisayo . Kwaye xa umntu esaphula, ngokukhawuleza kuya kuvakala i-alarm ebukhali ngokukhawuleza, kwaye iya kunika uphawu lwe-alarm kwiziko lolawulo.Ifanelekile indawo yokupaka kwiindawo zokuhlala, amashishini kunye namaziko, iihotele, izakhiwo zorhwebo, imibutho karhulumente, inkampani yezothutho, izibhedlele, iidolophana, iimarike zokuthenga, njalo njalo.I-Shenzhen TigerWong Technology Co., Ltd Ubuchwephesha obuPhezulu boMgangatho oPhakamileyo wokuPaka iKiosk yeNtlawulo eneBarcode Reader yabenzi bentlawulo ezenzekelayo abavelisi, iqela lobuchwephesha nelisebenzayo lokufikelela kwabahambi ngeenyawo, lixhasa izisombululo ezingalungelelaniswanga.
Ulawulo lweSithuthi esiHotyokisayo iAnpr / Lpr / Alpr iKhamera yokuPaka iKhamera TGW-LAV4
Eyona khamera iLpr/Anpr/Alpr yeKhamera eZimamelayo kwiNkqubo yokuPaka iSisombululo uMvelisi TGW-LBV2
Itekhnoloji yeLayisensi yePlayithi yoKwamkeleka (iLayisensi yePlati yokuQatshelwa, iLPR) isekwe kubuchwephesha bekhompyuter, ukusetyenzwa kwemifanekiso.itekhnoloji, kunye neNgcaciso engaqondakaliyo yokwakha iimpawu zemodeli yesithuthi, ukuchonga uphawu lwezithuthi,njengePleti, imodeli, umbala, njl. Iyakwazi ukukhupha ngokuzenzekelayo umfanekiso wepleyiti kumfanekiso, isebenzisa umfanekiso ophezuluitekhnoloji yokucubungula, ukuqondwa kwepateni kunye nobukrelekrele bokwenziwa kulwazi oluqokelelweyo lwemifanekiso kunye nokucubungula, luyakwaziukuchonga ipleyiti yelayisensi Amanani, iileta kunye nabalinganiswa Chinese, kunye nesiphumo ukuqatshelwa ngqo, yenza inkquboibe yinyani.
I-lpr ip yekhamera ye-automatic yelayisensi yepleyiti yokuqaphela isikhokelo sokupaka i-TGW-LFV2
TGW-LFV2.Uyilo lufuna izakhono ezininzi. Ngaphandle kolwazi olusisiseko olufana ne-Kinematics kunye ne-Mechanisms, zikwabandakanya i-Technical Drawing kunye ne-Computer-Aided Engineering (CAE).Itekhnoloji yeLayisensi yePlayithi yoKwamkeleka (iLayisensi yePlati yokuQatshelwa, iLPR) isekwe kubuchwephesha bekhompyuter, ukusetyenzwa kwemifanekiso.itekhnoloji, kunye neNgcaciso engaqondakaliyo yokwakha iimpawu zemodeli yesithuthi, ukuchonga uphawu lwezithuthi,njengePleti, imodeli, umbala, njl. Iyakwazi ukukhupha ngokuzenzekelayo umfanekiso wepleyiti kumfanekiso, isebenzisa umfanekiso ophezuluitekhnoloji yokucubungula, ukuqondwa kwepateni kunye nobukrelekrele bokwenziwa kulwazi oluqokelelweyo lwemifanekiso kunye nokucubungula, luyakwaziukuchonga ipleyiti yelayisensi Amanani, iileta kunye nabalinganiswa Chinese, kunye nesiphumo ukuqatshelwa ngqo, yenza inkquboibe yinyani.
LPR/ ANPR HD Camara Isithuthi isoftware ukuqondwa ipleyiti yelayisensi kunye yokupaka isango oluzenzekelayo TGW-LGV2
Ubuchwephesha be-LPR/ ANPR yeHD yeCamara yeLayisenisi yeLayisenisi yeLayisenisi yesoftware yokupaka isango elizenzekelayo lokupaka abavelisi be-TGW-LGV2. uhamba ngenkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho, equka ukujonga iziphene zelaphu neziphene, ukuqinisekisa umbala ochanekileyo, kunye nokujonga ukomelela kwemveliso yokugqibela.
Inkqubo yokulawula ukufikelela ngokuzenzekelayo yokupaka kunye nokuqatshelwa kwepleyiti yelayisensi ngekhamera ye-HD TGW-LHV4
TGW-LHV4.Imveliso igqwesa ezinye iimveliso ezifanayo ekusebenzeni kunye nomgangatho.Isebenza njani inkqubo yokupaka iimoto zeLPR1.Ekungeneni: Isithuthi siya phambi kwesango lokungena, kanye phambi komqobo. Ikhamera ibona ngokuzenzekelayo kwaye irekhode inani lepleyiti, umhla kunye nexesha lokungena kwisoftware. Umqobo wokungena uyanyuka uvumela umqhubi ukuba angene kwindawo yokupaka iimoto. Umqobo uwela phantsi ngokuzenzekelayo xa isithuthi sidlula.2. EkuphumeniIsithuthi simisa ekuphumeni, kanye phambi komqobo. Ikhamera iyayibona ngokuzenzekelayo ipleyiti, emva koko isoftware iya kuba yiakhawunti yeathom intlawulo yokupaka kwaye ibonise kwisiboniso se-LED, umqhubi uhlawule umrhumo wokupaka, Umqobo wokuphuma uyenyuka, ovumela umqhubi ukuba ashiye indawo yokupaka. Imiqobo yehla ngokuzenzekelayo xa isithuthi sidlula .